Fanomezan’i Mali voninahitra ireo lasibatra sy ireo maherifo tsy fantatra anarana nandritra ny fanafihana ny Radisson Hôtel ao Bamako · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2015 4:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Español, Magyar, македонски, 繁體中文, 简体中文, Français
Nisy andian'olona mitam-piadiana tao Bamako tamin'ny zoma 20 Novambra niditra tao amin'ny fandraisam-bahiny iray ary naka olona 170 ho takalon'aina. Ny isa voaray farany no nametraka fa 21 raha kely indrindra ny isan'ny maty tamin'ny niantrano sy ny mpiasa, ary telo tamin'ireo ihany koa raha kely no mpampihorohoro maty. Ankitifitifitra narahina fakana takalon'aina no nitranga tamin'ny 7 ora maraina tao amin'ny fandraisam-bahiny Radisson Blu. Nanao ankitifitifitra tao anatin'ilay fanorenana ny mpanafika rehefa nahavaha ny rafitry ny fiarovan'ny fandraisam-bahiny. Nanafika ilay fanorenanaavy eo ny miaramila maliana nampian'ny tafiky ny Minusma (ONU) sy ny vondrokery frantsay avy ao amin'ny GIGN hanafahana ireo takalon'aina. Tsy navela nigika sy novonoina avy eo ireo mpanafika vao maraina nandritra ny fifampitifirana fa mbola mitohy ny famotorana amin'ny famantarana ilay vondrona amin'ny ankapobeny. Nambara fa tany latsaka ankaterena i Mali. Ny fanafihana dia nambaran'ny vondrona Al Mourabitoune, izay milaza ho manoa ny vondrona Al Quaeda, ho nataony. Nitranga izao raharaha izao herinandro taorian'ny fanafihana nahafatesana olona 130 sy naharatrana olona mihoatra ny 350 tao Parisy fa izany fanafihana izany moa dia ny vondrona Daesh no nilaza ho nanao azy.
Ali Yazbeck, mpanao mofomamin'ny fandraisambahiny, naratran'ny bala anankiroa, ny iray eo amin'ny tenda ary ny iray eo an-damosina, nitantara teo ambony farafaran'ny hopitaly ny zavamisy tsy fahita firy. Rehefa nitifitra ilay mpanafika nanao kasikely voahodidina fehiloha, dia lasa niafina tao amin'ny birao iray niaraka tamin'ny vehivavy roa mpampandroso sakafo i Yazbeck. Nitantara ny zava-nanjò azy izy:
Mitazona fivarotan-tsigara eo anjoron'arabe mifampijidina amin'ny arabe misy ny vavahadin'ny Radisson i Baïda sy i Penda Cissé. Hoy i Baida tamin'ny fijoroana vavolombelona nataony:
Rehefa ao anaty toe-draharaha mihenjana dia mihenjana, dia amin'ny alalan'ny herimpo sy ny tsy fikoropahana no ahafahana misoroka fahaverezana ain'olona. Toy izany indrindra ny leadership sy ny fahaizamifehy vitan'i Tamba Diarra mpitantana ny fandraisambahiny.
Tamba Diarra nitantara ny niainany nandritra ny fanafihana sy izay nezahiny natao hiarovana ny ain'ireo takalon'aina:
Mila marihana ihany koa ny nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny fahombiazan'ny ny asa nataony sy ny fitsimbinany araka izay tratra ny ain'olona. Niely haingana tao amin'ny tranonkala maliana ny sarin'ny miaramila maliana iray nibaby takalon'aina iray hitondra azy any amin'ny faritra azo antoka. Boukary Konaté ao Bamako nanoratra ny fiaikeny volana tamin'ny nataon'ilay miaramila: